Cabsi laga qabo howlgal ay Hindiya ka fulisay hawada sare, oo halis galin kara dunida - BBC News Somali
Image caption satellite-ka la burburiyay ayaa hawada loo diray bishii Janaayo
Mareykanka ayaa qeylo dhaan kasoo saaray dhibaato dunida kasoo wajihi karta tijaabo ay ciidamada cirka ee dalka Hindiya ka sameeyeen hawada sare.
Ku simaha wasiirka difaacada ee Mareykanka ayaa ka digay dhibaato ka dhalan karta tijaabadii ay Hindiya ku sameysay hubka lidka ku ah qalabka satellite-ka, kaasoo ay Arbacadii ku burburisay mid ka mid ah satellite-yadeeda.
Patrick Shanahan ayaa sheegay in Mareykanku ay wali daraaseynayaan cawaaqibka ka dhalan kara tijaabadaas, halka xukuumadda Delhi ay ku adkeysatay in howlgalkeeda uusan halis abuureynin.
"Farriinra aan dirayo waa: Dhammaanteen waxay nolosheenna ku xiran tahay hawada sare, yeynaan halkaas ka sameynin isku dhex yaac. Hawada sare waa inay noqoto meel aan howlaheenna ku wada fulin karno. Hawada sare waa meel la doonayo in dadku ay si xor ah uga wada howl galaan", waxaa sidaas warbaahinta ku yidhi Mr Shanahan oo shir jaraa'id qab tay ka dib tijaabada ay sameysay Hindiya.
Saameynta ka dhalata tijaabada noocan ah ayaa waxyeelleyn karta habsami u socodka howlaha satellite-yada kale ee loogu adeego shacabka dunida iyo waliba kuwa milatariga.
Waxaa suurta gal ah marka uu isku dhex yaac ka dhaco hawada sare in qalabka satellite-yada ay ku dhawaac waxyaabo kale oo halis weyn abuuri kara.
Balse dowladda Hindiya ayaa sheegtay in ay si laga baaraan dagay u fulisay howlgalkeeda ay ku magacowday 'Mission Shakti'.
Waxay saraakiisha xukuumadda Delhi sheegeen in ay tijaabada ku sameeyeen meel 300km ka hooseysa heerka caadiga ah ee hawada sare, taasoo aysan dhibaato ka imaan karin.
Muddo isbuucyo ah ayaa la filayaa in burburka hubka iyo haraadiga qalabka la qarxiyay ay kusoo gaaraan dhulka, sida ay Hindiya sheegtay.
Hase yeeshee qaar ka mid ah khubarada arrimahan ku xeel dheer ayaa shaki weyn ka muujiyay sheegashada Hindiya ee ah in howlgalkeeda uusan dhibaato u keeneynin dunida, iyagoo sheegay in burburka hawada ku duulaya aan la xakameyn karin.
Milatariga Mareykanka ayaa sheegay inay hadda isha ku hayaan 250 qeybood oo ka mid ah burburka qalabka la qarxiyay, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay sarkaal ka tirsan waaxda gaashaan dhigga Mareykanka ee Pentagon-ka.
Hindiya ayaa ah waddanka afaraad ee dunida ka fuliyay tijaabada hubka lidka ku ah qalabka satellite-ka, kaasoo loo yaqaanno ASAT.
Dowladda Shiinaha ayaa cabsi noocan ah horay uga abuurtay dunida, ka dib markii ay tijaabo tan la mid ah sameysay sannadkii 2007-dii.
Howlgalka Shiinaha oo xilligaas laga sameeyay masaafe dhan 865km ayaa hawada sare ku yaaciyay burbur badan oo isku gedaamay hawada.
Hay'adda maamulka hawada sare u qaabilsan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo Nasa ayaa sheegtay in sidoo kale tallaabada ay Hindiya qaaday laga dhaxli karo khatar baaxad weyn leh.
Mareykanka ayaa tijaabadiisa noocan ah sameeyay sannadkii 1959-kii.